VENETA NOOCYO KALA DUWAN: SHARAX, SAWIR, SHARAXAAD, BEERITAANKA, DARYEEL, FAA'IIDOOYIN, FAA'IIDO DARO - BARADHADA
Noocyada baradhada "Veneta" (ama "Vineta") waa beereyaha baradhada aadka u caansan ee booska Post-Soviet.
Tani noocyo kala duwan ee digriiga waxaa lagu gartaa fududaynta beerashada iyo tayada dhadhanka wanaagsan ee dalagga la goostay.
In this article waxaan ka hadli doonaa sifooyinka iyo sharaxaad ka duwan ee kala duwan "Veneta", iyo sidoo kale sida loo koro dalag badan oo baradho ah ee gurigiisa dalka.
Tuber "Veneta" waa macaan kala duwan, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo baradhada la shiilay ama baradhada french.
Bush sredneraskidisty, qumman. Caleemaha si toos ah ayey u koraan, dhererkoodu wuxuu gaaraa 60-70 cm Caleemaha waxaa lagu rinjiyeeyaa midab cagaaran oo qoyan, cidhifyadu waxay leeyihiin qallaf yar. Corolla waa yar tahay, badiyaa dhadhan iyo cadaan. Qiyaas ahaan 10-12 miraha waxay abuuri karaan hal duurka.
Miraha noocyo baradho ah "Vineta" waa mid aad u kooban oo qafiif ah. Diirka waa midab huruud ah ama midab khafiif ah, jidhku wax yar ayuu ka yar yahay diirka, badanaaba wuxuu leeyahay midabka maqaarka aan rasmiga ahayn. Qaybta, digriiga waxay leeyihiin shabakad sir ah. Indhaha barafka ee noocyada kala duwan waa kuwo yaryar, oo haddii aadan si hoose u eegin, waa wax aan la ogaan karin.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay hal version, baradhada waxaa markii hore loo soo bandhigay Yurub dhamaadkii qarnigii 16aad. Si kastaba ha noqotee, 200-ta sano ee soo socda, dadka reer Yurub ee reer galbeedka ah ayaa iska fogeeyay xiriirka warshadkan si kasta oo suurta gal ah, maaddaama ay u arkeen sunta iyo "Ibliiska".
Celceliska miisaanka ee digriiga waa 80-90 g. Giriigga ah ee miraha kama badna 15.5%. Haddii aad raacdo agrotechnology beerashada saxda ah, tayada dhadhanka ee digriiga waxay noqon doontaa heerka ugu sareeya.
Caleenta baradhada "Veneta" waa macmacaan hore u bislaaday. Waxa uu leeyahay dhadhan sare oo miro iyo dhalid aad u fiican. Iyada oo la ilaalinayo agrofone iyo shuruudaha agrotechnical, laga bilaabo 1 hektar oo ah beeraha baradho ayaa laga goyn karaa min 235 ilaa 239 sentimitir oo dalagga ah. Kala duwan ayaa leh iska-caabbinta abaarta iyo iska-caabbinta cuduro kala duwan.
Veneta ayaa si gaar ah ugu caan ah beeralayda baradhada ee Bartamaha Aasiya, halkaas oo dhibaatada ka timaada roobab joogto ah markasta oo la sheego. Sababtoo ah xaqiiqda ah in miraha "Veneta" aysan kala daadin xitaa ka dib daaweynta kuleylka adag, waxay si firfircoon u isticmaalaan si ay u diyaariyaan noocyo kala duwan oo suxuun leh: maraq, saliida, saladh, baradhada french, iwm.
Waa muhiim! Kala duwanaantu waa mid ka mid ah kuwa aan badalin midabka saxarka kadib daaweynta kulaylka.
Waxyaalaha baradhada Tani waxay leedahay faa'iidooyin badan, kuwaas oo xoog badan oo growers baradho ah si ay u koraan Veneta:
Suuq geynta: 85% ilaa 97%;
hore bislaada iyo Bisaylkiisa u fiican ee digriiga;
dhadhanka aad u sarreeya, waxaad isticmaali kartaa si aad u karisid gebi ahaanba suxuunta;
waxay ku sii jirtaa xaalado aan fiicnayn muddo dheer;
caleemaha caleemaha lama duugoobin;
ku habboon beerashada gobollada leh roobab yaryar;
adkaysi u ah cudurrada noocyada kala duwan: fayraska la isku qurxiyo iyo lakulanka, kansarka baradhada, iwm.
Immune noocyada kala duwan ee dhaawacyada farsamada;
aan qabin in ay ka kooban tahay ciidda beerashada.
Dhibaatooyinka noocan ah ee baradho aan loo qoondeeyn. Ma in ay bannaanka qaar ka mid ah ayaa sheegaya in noocyada kala duwan ee laga yaabo inay saameeyeen by xun, sidaas darteed waxaad u baahan tahay in aad ula macaamilaan hab wakhti ah.
Sida loo abuuro baradhada
Haddii aad raacdo xeerarka asaasiga ah ee digriiga, waxaad heli kartaa soo celinta saaxiibtinimo ee alaabada khudradda hore.
Waxaa ugu wanaagsan in la beero baradho on ciidda, ciidda, macdanta ama loamy carradu. Miraha beeraha soo koraya ayaa sidoo kale ku habboon beerashada. Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan loo baahnayn in lagu beero baradho on dhoobada culus iyo carrada dhoobo. Dalagyada jiilaalka waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee digriiga. Si kastaba ha ahaatee, marnaba maaha inaad soo dhisto "Veneta" meeshii tamaandhadu koray sanadii la soo dhaafay, maaddaama labadan khudradood ay saameeyeen cuduro isku mid ah.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanshaha baradhadaas waxaa lagu xannibay jarmalka Jarmalka bartamihii qarnigii labaatanaad.
Baradhadu, waxay ka duwan yihiin dalagyada kale, waxay u baahan yihiin 4-5 jeer ogsijiin badan. Sidaa darteed, ka hor inta beerto, ciidda waa in la daboolaa oo dabacsan, ka dibna qoyan. Digriiga ee geedi socodka koritaanka ballaariyo, sidaas darteed ciidda beeritaanka waa in ay ahaato mid fudud oo dabacsan. Loosin waa in la sameeyaa laba jeer: dayrta iyo gu'ga (kaliya ka hor beerto).
Marka la eego baahida weyn ee dalaggu, waxaa jira qalab farsamo oo kooban oo soo saara shaqada shaqada iyo fududeynta beerashada - beeridda baradhada, hills, digriiga baradho.
Xulashada digriiga for beerto bilaabmaa dhowr toddobaad ka hor ka beerto. Waxaad u baahan tahay inaad doorato digriiga qiyaasta dhexdhexaadka leh indhaha yaryar. Qalabka beeraha ayaa si degdeg ah looga tuurayaa. Khubarada waxay kugula talinayaan daaweynta wax soo saarka leh xal of boric acid ama xal aqueous of digada. Nidaamyadani waxay xoojin karaan ciidamada difaaca ee digriiga.
Haddii aad rabto inaad wax soo iibsato wax soo saarka suuqa, ka dibna waxaad doorbideysaa noocyo qalaad ama midab leh oo baradho ah. Xaqiiqdu waxay tahay in noocyada noocan oo kale ah ay sababtoo ah tiradoodu ay ku yar tahay gobolkeenu aad u yarayn doonto cudurro kala duwan. Laakiin, nasiib daro, kaliya 3-4 sano oo kaliya.
Cunto baradho "Veneta" dabayaaqadii April ama horraanta May. Tan iyo noocyada kala duwan ee u bislaaday, in qaar ka mid ah gobollada koonfurta lagu beeray xitaa hore. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa wakhtiga aad rabto in aad qabato shaqo dhul, miraha habeenku waa inuu joojiyaa gebi ahaanba.
Marka laga beerto, digriiga waxaa lagu aasay ciidda si wanaagsan loo furfuray 7-10 cm. Haddii ciidda aan la karayn, qoto dheer waa in la yareeyo 30-35% (laakiin waxaa wanaagsan in aan lagu beerin bataatada carrada sida, tayada iyo tirada dalagga ayaa hoos u dhigi doona). Masaafada u dhaxaysa safarka digriiga waa inay ahaataa qiyaastii 60-70 cm, inta u dhexeysa digriiga oo isku xiga - 25-30 cm Tirooyinkan waa tixraac, waana la jecel yahay in ay u hoggaansamaan, sababtoo ah haddii masaafooyinka aan la haynin, dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan marka hilling iyo goosashada.
Ma taqaanaa? Peter I. wuxuu hore u keenay baradhada degaanka Ruushka.
Daryeelka haboon iyo waqtigaba - fure u ah guusha tayada tayada. Inkasta oo kala duwanaantu aysan gaar ahaan kuugu diyaarsaneyn daryeelka, hase yeeshee ma ogolaan kartid inaad wax fursad u hesho.
In gobollada koonfurta ee Russia iyo Ukraine, noocan ah ee baradho u baahan yahay waraabinta. Waxaan hore u xusnay in "Veneta" waa nooca abaarta u adkaysta baradho, tani waa run; Si kastaba ha noqotee, haddii aan dayacno waraabinta gobollada gaar ahaan kulul iyo kuwa qallalan, heerka tayada iyo tirada dalagga ayaa hoos u dhigi doona. In gobollada bartamaha iyo waqooyiga ee Ukraine, iyo sidoo kale gobollada bartamaha iyo galbeedka ee Russia oo leh xagaaga dhexdhexaad ah qoyan, waraabinta waa la illoobi karaa.
Si kastaba ha ahaatee, sida beeraleyda qibrad leh ayaa leh, Veneta waxay u baahan tahay 3 xayeysi ah xilliga oo dhan.: waraabinta ugu horeysa waa in la fuliyaa isla markiiba ka dib markii ay dhalatada of ay duurka, tan labaad - in habka of gaysashada, saddexaad - at dhamaadka ubax.
Biyaha waa inay ahaato mid balaadhan, sida ciidda waa in lagu qooyay biyo ugu yaraan nus mitir. Taas waxaad u baahan tahay inaad ku shubto 50 litir oo biyo ah halkii 1 m². Waraabinta waxaa ugu wanaagsanaa subixii hore, sida xilliga kulul ee digriiga daaweyn karaan. Baradho quudin ayaa billaabanaysa bil kadib markii laga beerto. Gobolada waqooyiga ee waqooyiga ee Russia, quudinta ayaa laga yaabaa in dib loo dhigo ilaa bartamihii June. Digriiga ayaa si fiican uga jawaab celinaya dharka ugu sarreeya ee superfosphates, bacriminta nitrogenous, sulphates ama chloride potassium, iwm. Dukaanka aad si degdeg ah u qaadan kartaa nitrogen-fosfooraska-potassium bacriminta adag oo leh calaamadda 10:20:10. Sawirrada ayaa loola jeedaa saamiga ka mid ah walxaha ku jira xirmadda oo leh bacarimiso. Bacriminta noocan oo kale ah waxaa lagu dabaqaa sida ku qoran tilmaamaha oo ay weheliyaan waraabinta.
Ka dib markii quudinta ugu horeysa ee geedi socodkan loo baahan yahay in lagu celiyo laba jeer oo kale. Markii ugu horeysay - marka ubbooyinku u muuqdaan, tan labaad - ka dib dhammaadka ubax.
Waa muhiim! Haddii caleemaha baradho waa weyn iyo geedka, ka dibna Bacriminta nitrogenous (amooniyam, HOL, iwm) waa ka badan oo waa in aan lagu dabaqo ciidda.
Kala duwan ayaa sidoo kale si wanaagsan u jawaabaya Bacriminta organic, sida shimbirta. Ku soo qaado qiyaasta 200 g mitir labajibbaaran.
Cagaarka, dabacsan, hilling
Xakamaynta iyo jaridda dhirta ayaa ah tallaabooyin muhiim ah habka daryeelka ee Veneta. Haddii aan u oggolaanno koritaanka miraha on miraha baradho, dhalidda ayaa hoos u dhigi doonaa si xoog leh. Intaa waxaa dheer, qolofta sare ee lakabka sare ee carrada waxay keeni doontaa xaqiiqda ah in digriiga heli doonaa oksijiin yar, natiijada, tayada ay sidoo kale hoos u dhici doonaa.
Loosinta waxaa lagu sameeyaa caawinta qoto dheer. Ciidda waa in la furfuraa ilaa dhammaan naasaha waaweyn ee dhulka laga saaro. Iyadoo guga dheer, geeddi-socodka noocan oo kale ah ayaa lagu soo celiyaa ugu yaraan 2-3 jeer. Sidoo kale, ha ilaawin inaad si fudud u daboosho kadib markaad waraabiso. At daqiiqado sida, waxaad u baahan tahay si loo dabciyo ciidda iyada oo gacan ka helitaanka hoe ah, laakiin si taxadar leh, si aanay u waxyeeleeyaan afkoda baadiyaha.
Cagaarka waxaa la sameeyaa dhawr jeer inta lagu jiro xilliga oo dhan. Tirada cawska waxay ku xirnaan doontaa inta jeer ee cawska cusubi ka muuqan doono goobta. Rugta baradho leh waxay u baahan tahay kabo. Hannaanka dhirbaaxada, ciidda markiiba way furmeen, sidaa darteed laba hawlood ayaa lagu xallin karaa hal mar.
Waa muhiim! Iska yaree baradhada laguma talinayo in lagu beeray ciidda ba'an, sida ay u kala jajabin karaan.
Ku dhowaad dhammaan beeralayda ku nool dalkeena waxay tixgeliyaan baradho qashin ah mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee daryeesha. Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan tan. Qaar ka mid ah bannaanka u isticmaalaan baradho beerto qoto dheer - iyo baahida loo qabo hilling waa la tirtiray. Qaar kalena waxay isticmaalaan tiknoolajiyada casriga ah - marka baradhada barafku ku faafaan dhulka oo ay ku daboolaan mulch, oo kaliya dushooda. Labaduba waxay ku qanacsan yihiin natiijooyinka.
Gobollada bartamaha iyo waqooyiga ee Ruushka, baradho Veneta waa in la gooyaa marka ay duurka u gaaraan dherer 12-15 cm. Gobolladaas oo dhaxan habeenkii oo socon kara ilaa xagaaga hore, hilling waxaa la sameeyaa isla markiiba ka dib caleemaha ugu horreeya ee ciidda samee. Laakiin inkastoo dhammaan arrimahan, nidaamkani waxaa la fuliyaa kaliya subaxda ama fiidkii. Sidoo kale, geedka oo dhan wuxuu si badan u waraabiyaa, ama roob kadib.
Inta badan dalagyada baradho waxay ku dhuftaan baradiidka Colorado baradho. Beershaha baradho kasta wuxuu ogyahay sida loola tacaalo cayayaankan. Lamaanayaasha Colorado waxay si joogto ah u soo saari karaan difaacida kiimikooyinka kala duwan, sidaa daraadeed marar badan waa inay shaqeeyaa dhowr jeer, had iyo jeer diyaar garow duwan.
Bannaanka iyo beeraha ku talinaynaa in la burburiyo cayayaanka by macnaheedu yahay farsamada. Tusaale ahaan - si ay u ururiyaan dirxiga ee duqsigu ku jiro weelasha cufan leh kerosene ama biyo cusbayn leh (isku dhafka ay isla markiiba u dhintaan). In dagaalka ka dhanka ah Colorado baradho baradho ku caawin doonaa xal aqueous of HOL. Diyaari 100 g oo ah HOL halkii 10 litir oo biyo ah, ka dibna ku buufin subaxa hore ama fiidkii dambe. Si looga hortago muuqaalka cayayaanku, waxaad diirin kartaa diirka yar ee godadka marka la beerto digriiga.
Mashiinka kiimikada waxaa loo oggol yahay wax ka badan hal jeer 6-8 maalmood.
Ma taqaanaa? "Linzer Blaue" waa noocyo baradho ah oo leh buluug buluug ah iyo diirka.
Ka soo horjeeda wireworms waxay isticmaalaan baash laga sameeyey maraqa baradho. Waxaa lagu aasay dhulka dushiisa, ka dibna dib u qoday oo baabi'iyay dhammaan dirxiga.
Si loola dagaallamo dhirbeelayaasha waxay isticmaalaan dabin ku salaysan saliid la karkariyey, masago, saliida, sarreen, iwm.
Si looga hortago dhacdooyinka baradhada baradho iyo nematodes on goobta, waa inaad u hoggaansamaan dhammaan tallaabooyinka karantiil. Si looga hortago nematodes ka soo muuqan goobta, carrada waxaa lagu buufiyaa leh thiazone 30 maalmood ka hor bilowga beeritaanka (40%). Si looga hortago muuqaalka dhogorka boodhka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo 10% karbofos. Waxaa la ogyahay in noocyada kala duwan ee "Veneta" ay saameeyn ku yeelan karto cilladda. Sida qiyaasta ka hortag ah, beerashada waa in lagu daaweeyaa kiimikada sida: Ridomil Gold ama Acrobat. Isticmaal sida waafaqsan tilmaamaha; Daaweynta kowaad waxaa la fuliyaa marka ay duurka u gaaraan height ah 15-20 cm.
Isla markiiba ka dib goosashada baradho waa in si fiican loo qalajiyey aagga hawo diiran. Qolka noocan oo kale ah waa inuusan helin qoraxda tooska ah. Intaa waxaa dheer, huurka badan sidoo kale waa mid aan loo baahnayn. Ka dib markii la qalajiyo, baradhada kala duwan ee "Vineta" waxay u baahan tahay in la gooyo bacaha shidaalka waxayna ku qarsoon yihiin qolka hoose ama qolka. Dambe waa inuu lahaadaa hannaanka neefta iyo qoyaanka ugu fiicnaanta.
"Veneta" waxaa lagu kala duwan yahay ilaalin wanaagsan. Ka dib 7-9 bilood goosashada ka dib, waxay ku sii jiri doontaa 88% bandhigga; Marka laga reebo, tayada dhadhanka ayaa lagu badbaadin doonaa heer sare.
Baradhada kala duwan ee "Veneta" - mid gaar ah ee dhadhanka iyo guryaha. Asaasida aminada, oo ku jira halabuurka, ha dhumin xitaa ka dib markii daaweynta kulaylka. Qarsoodi la'aanta daryeelka iyo tayada ganacsiga sare ayaa Vineto ka mid ah noocyada barafka ugu fiican maanta.